Nidaamka Waqtiga Shabakadda (NTP)
waa maxay Nidaamka Waqtiga Shabakadda (NTP)?Xaqiiqdii, waa nidaam shabakad oo loo isticmaalo in lagu dhejiyo saacadaha u dhaxeeya nidaamka xisaabinta ee shabakad isku xiran oo xiran. Waxay ahayd illaa iyo bartamihii dhexe ee 1980s oo waxaa abuuray David Mills oo ka tirsan Jaamacadda Delaware; waa mid ka mid ah qawaaniinta ugu caansan hareeraha internetka. NTP waxay ku farsameeyeen marxalado kale oo isku dhafan oo aan haysan awoodooyin yar si loo bedelo wakhtiga aragtida aaladda wakhtiga ilaysiga ama adeegga wakhtiga ee la xiriira ka-faa'iideystaha ama isku xirnaanta kala duwanaanta dib-u-dhaca ee laga helo shabakadaha macluumaadka macluumaadka.
NTP waxay la kulantay isbeddello kala duwan tan iyo markii la soo bandhigay sannadkii hore 30. 0 waxaa lagu qeexay RFC 958 bishii Sebtembar ee 1985. NTPv0 waxay ku guuleysan kartaa waqtiga saxda ah dhowrka bilood ee soo socota. In 1988, RFC 1059 ayaa ku takhasusay NTPv1, oo tilmaamaya tuningka NTP ee adeega macaamiisha iyo qaabka la wadaago. 1989, RFC 1119 waxay ku dheehan tahay NTPv2, oo ay ku jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin qandaraasyada maareynta iyo qorshaha xaqiijinta, kuwaas oo weli loo adeegsaday qayb ka mid ah noocyada maanta. RFC 1305, oo ka soo baxday 1992, ayaa qeexday NTPv3. NTPv3 waxaa ku jiray baadhitaan dheerad ah iyo baaritaan, taas oo ka caawisa macaamilka inay ka soo qaadaan ilaha kala duwan. Habka isgaarsiinta ayaa sidoo kale la ogaaday iyada oo gacan ka geysaneysa fududeynta waqtiga soo gaadhida shabakad badan. 2010, RFC 5905 waxaa loo qaybiyey faahfaahinta NTPv4, hase yeeshee waxaa kor u kacay RFC 7822 bishii March ee 2016. NTPv4 waa isku-habaynta imika ee NTP. Waxay xajisaa cabbir la taaban karo oo ka mid ah qaybaha la midka ah ee NTPv3 laakiin waxaa ka mid ah xoojiye IPv6 oo ah nidaamka shabakada ee aasaasiga ah. Xaqiijinta ayaa si faahfaahsan loo soo hagaajiyay waxayna siineysaa qandaraaska amniga guud.
NTP waxay isticmaashaa nidaamyo kala duwan oo waqti dheer ah. Heer kasta oo ka mid ah nidaamka horukaca ayaa loo yaqaanaa stratum waxaana lagu buuxiyaa kalsooni miisaaman oo ka bilaabma eber (0). Markaad ku dartid wakhti, ilo iyo iskudubarid ilaha sare ee qalafsan (hoos u dhig qiimaha sayniska), waxaad ku dartaa 1 tixgelinteeda. Waxaan ka faa'iideysan karnaa qadarinta heerarka heerkul ah ee kalsoonida ilaha waqtiga. Zero waa kan ugu kalsoonaan karo, 15 waa kan ugu yar ee la isku halleyn karo, isla mar ahaantaana heer heer sare ah. Qalab ka mid ah 16 waa mid aan la sineyn oo wuxuu sheegay inuu waalan yahay. Qalabka 16 qalabka casriga ah maahan ilaha waqtiga dheeriga ah. NTP waxay si caadi ah u dirtaa wakhti isku xiran Universal Time (haddii kale waxaa loo yaqaan Isku-duwaha Universal Time ama UTC). Isbedelka waqtiga xaafadda waa in ay suurtogal noqotaa marxaladda wakhtiga dhow ama alaabada macaamiisha.
Diritaanka caadiga ah ee NTP ee ganacsi waa wakhti ka timaada ilo lagu kalsoon yahay, tusaale ahaan, ilaha waqtiga maamulka. Dalka Mareykanka, Machadka Heerarka iyo Tiknoolajiyadda Qaranku wuxuu leeyahay marwalba xaflado ah oo aan u sineyno. At tf.nist.gov/tf-cgi/servers.cgi, waxaad ku ogaan kartaa hoos u dhaca server-yada, meelaha ay ka midka yihiin iyo IP-yada si ay u muujiyaan wakhti go'an. Marka aad waqti u qaadatid server-ka waqtiga xaafada iyo kor u kaca, waxaad markaa ka faa'iideysan kartaa taas oo ah ilaha waqtiga ee gudaha shabakadda. Beddelka iyo wareegyada (Cisco iyo kuwa kale) waxay markaa ka qaadi karaan waqti ka timaada adeeggaaga wakhtiga dhow, kadibna waxay u guuri karaan si ay u noqdaan ilo waqti ka yimid qalabkii hore. Inta badan nidaamyada waaweyn ee shaqeeya waxay kordhinayaan NTP oo ay ku jiraan Windows. Dhamaan noocyada Windows tan iyo Windows 2000 waxay leeyihiin Windows Time Service (W32Time) si ay u saacido wakhtiga isticmaalka NTP.
Shabakada maanta, waqtigu waa la isku mari karaa gudaha xabadka ama miisaaniyado badan, weli maxaase? Taasi waxay ku xiran tahay! Waxay ku tiirsan tahay codsiyada loo isticmaalo iyo shuruudaha waqtiga loogu talagalay. Waxay noqon kartaa in saacadda "macquul ah" ay noqon karto mid ku filan si loo ogaado marka la soo diro email ah oo weliba lagu daray. Marjarada wakhtiga ah ee awoodaha aasaasiga ah ee saxda ah ee gudaha 10s of milliseconds ku filan. Arjiyada waxay noqon kartaa waqti dheer oo la taaban karo. Marka laga eego aragtida baaritaanka, haysashada shaabad waqti ah oo ku jirta qarxanimadu waxay kaa caawin kartaa inaad go'aan ka gaarto arrimaha ku dhex jira shabakadda. Tixgeli codsiyada qiimaha leh. Inuu ka badan yahay saacad macquul ah ee maareynta koontada ama is-weydaarsiyada kale ee miisaaniyadeed waa shuruud aan loo baahnayn. Mid ka mid ah codsiyada asaasiga ah ee isticmaalka NTP wuxuu ahaa adeega duulista, iyo macaamil caadi ah, waxaan ku faraxsanahay in aan ogaanno in badeecada iyo qalabka raadraacaya duulimaadyadayada ay ka dhigan tahay mid saxan oo ku saabsan miisaaniyadda. Tani waxay u oggolaaneysaa kuwa daba socda duulimaadka in ay si weyn u hagaajiyaan fikirkooda sida aagga diyaaradaha iyo u dhowaanshaha dadka kale.
NTP waa nidaam udhaxeeya muddo ka badan sanadaha 30 oo weli buuxiyo baahi. Waxay u muuqatay mid caadi ah in ay leedahay saacado, waxaana si wanaagsan ugu tiirsanaan karnaa wakhtiga. Maanta NTP maanta, waxaan ka heli karnaa wax ka badan ilo macquul ah oo aan heleyno heerka saxda ah ee millisecond. Fursada aad uga baahan tahay wax ka badan tan, fiiri Precision Time Protocol (PTP) ... si kastaba ha ahaatee waa mid kale oo boosteejo ah.